Emmanuel Macron oo booqasho kadis ah ku tagay Sacuudi Carabiya – Kasmo Newspaper
Emmanuel Macron oo booqasho kadis ah ku tagay Sacuudi Carabiya
Updated - November 11, 2017 1:28 pm GMT
London (Kasmo), Madaxweynaha Faransiiska, Emmanuel Macron, ayaa Jimcihii 10 Nofember, booqasho aan horey loo sii qorshayn ku tagay Sacuudi Carabiya, isaga oo markii u horreysay la kulmay Dhaxal-sugaha, Maxammed bin-Salman.
Booqashada Macron oo ah markii ugu horreysay Bariga Dhexe waxay ku soo beegmaysaa xilli xiisad gaar ah ka dhex taagantahay Iiraan iyo Sacuudiga, taas oo ku saabsan dagaalka Yaman iyo arrinta Lubnan.
Madaxweynuhu wuxuu Sacuudiga uga soo gudbay dhanka UAE, halkaas oo uu uga qaybgalay daahfurka Madxaf-dhaqameedka Faransiiska ee loo yaqaanno “Louvre Abu-Dhabi”.
Maalintii Axaddii, 5tii Nofembar fallaagada Xuutiga ee Iiraan taageerto waxay gantaal dhexda laga qabtay ku soo rideen agagaarka garoonka Caalamiga ah ee Riyadh. Ilaa toddobaadkii hore dalka Lubnan ayaa noqday goob kale oo si toos ah 2da dhinac ugu hardamaan, waxa loo yaqaanno dagaalka durugsan “Proxy War”.
Istiqaaladdii Ra’iisal Wasaare Sacad Xariiri ee 4tii Nofembar waxay ka dhalisay Gobolka xiisad cusub, iyada oo Sacuudigu walaac weyn ka qabo galaangalka Xisbullah iyo Iiraan ku yeelanayaan qaybtaas Bariga Dhexe Khamiistii, 9kii Nofembar, Sacuudiga iyo xulufadiisu waxay muwaadiniinta ka joogta dalka Lubnan ku amreen in ay dhakhso uga soo baxaan, nabadgalyo xumo darteed.
Macron wuxuu dhaleeceeyay weerarkii gantaal ee Xuutiga wuxuuna hoosta ka xarriiqay in Faransiisku garab taaganyahay Boqortooyada Sacuudiga. Dhanka Heshiiskii Nuclear-ka Iiraan ee Donald Trump dib uga laabtay 13kii Oktoobar, Macron wuxuu caddeeyay in dalkiisu xurmaynayo mowqifkii Midowga Yurub.
Xiriirka Faransiiska iyo Sacuudiga wuxuu soo jiray ilaa 1839kii, sannadkaas oo ahaa markii Qunsuliyaddii u horreysay ee Faransiiska laga furay magaalada Jeddah. Madaxweynihii hore, Francois Hollande, muddadii uu xilka hayay wuxuu Boqortooyada booqday 4 jeer oo midii ugu dambaysay ahayd bishii May 2015kii.